WTTC: Saudi Arabia kuitisa 22nd Global Summit iri kuuya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » WTTC: Saudi Arabia kuitisa 22nd Global Summit iri kuuya
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kubva pakutanga, apo denda rakaunza kushanya kwenyika dzese kusvika pakumira, Saudi Arabia yakaratidza kuzvipira kwayo kuchikamu chedu, kuve nechokwadi kuti yakaramba iri pamberi pechirongwa chepasi rose.
Global Summit yeWTTC yepagore ndiyo inonyanya kupesvedzera pasi rose uye Yekufamba & Tourism chiitiko.
Chiitiko muSaudi Arabia chichatevera inotevera inotarisirwa zvikuru Global Summit iri kuitika muManila, Philippines.
Mamwe mashoko eWTTC Global Summit muRiyadh achaziviswa munguva yakafanira.
The World Kufamba & Yekushanya Kanzuru (WTTC), iyo inomiririra yepasi rose Yekufamba & Tourism chikamu, inozivisa kuti yayo 22nd Global Summit ichaitika muRiyadh, Saudhi Arabhiya, pakupera kwa2022.
Global Summit yeWTTC yepagore ndiyo inonyanya kupesvedzera pasi rose uye Yekufamba & Tourism chiitiko. Saudhi Arabhiya yanga ichitungamira nzira itsva yepasirese 'yekugadzirisazve kushanya' uye musangano uyu muRiyadh uchaona vatungamiriri veindasitiri vachiungana nevamiriri vakakosha vehurumende kuti vafambise tsigiro yekuvandudza kuenderera mberi kwechikamu ichi, kuchiendesa kune ramangwana rakachengeteka, rakasimba, rinosanganisirwa uye rakasimba.
Chiitiko muSaudi Arabia chichatevera inotevera inotarisirwa zvikuru Global Summit iri kuitika muManila, Philippines, kubva 14-16 Kurume 2022.
Kutaura kubva kuRamangwana Investment Initiative muRiyadh, Saudhi Arabhiya, Julia Simpson, WTTC Mutungamiri & CEO vakati:
"Kubva pakutanga, apo denda rakaita kuti kufamba kwenyika dzese kumire, Saudi Arabia yakaratidza kuzvipira kwayo kuchikamu chedu, nekuona kuti yakaramba iri pamberi pehurongwa hwepasi rose.
“Zvakabatsira kutungamira mukumutsirwa kwechikamu icho chakakosha kuhupfumi, mabasa neraramo pasi rose.
"Neizvi tinotenda uye tinoda kuona kuedza kwavo kunoshamisa nekuunza chikamu cheGlobal Travel & Tourism kuHumambo gore rinouya."
Mukuru wake Al Khateeb, Gurukota rezvekushanya kwe Saudhi Arabhiya Akati:
“Ndinotambira danho rekusarudza Saudi Arabia senyika inotambira inotevera WTTC Global Summit muna 2022. Iyi iforamu yakakosha kune vega uye hurumende kuti vauye pamwe chete kuti vagadzirise zvakare kushanya kweramangwana, uye inonakidza kubata chiitiko ichi muHumambo. Uku kucherechedzwa kwehutungamiriri hweSaudi kubatsira chikamu chekushanya chepasi rose kupora, uye chakakosha, kuve chakasimba. Ndinotarisira kugamuchira vese Nhengo dzeWTTC gore rinouya. "
Kuti zvienderane nechiziviso ichi, tsvakiridzo yazvino kubva kuWTTC inoratidza iyo Middle East Travel & Tourism chikamu chakagadzirirwa kukura ne27.1% gore rino pamberi peEurope neLatin America.
Tsvagiridzo iyi inoratidzawo kuti kana hurumende dzikatungamira Kufamba & Kushanya, mabasa muchikamu anogona kusvika 6.6m muna 2022, achisvika pre-denda.